ओली–दाहाल छलफल सकारात्मक, एकता संयोजन समितिको बैठक बिहीबार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ओली–दाहाल छलफल सकारात्मक, एकता संयोजन समितिको बैठक बिहीबार
काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चाँडै पार्टी एकता संयोजक समितिको बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्। दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकताको टुंगो लगाउन बिहीबार पार्टी एकता समितिको बैठक बोलाउन सहमति भएको हो।
बुधबार दुई अध्यक्षबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा बिहीबार पार्टी एकता संयोजक समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। पार्टी एकताका विषयमा नकारात्मक चर्चा हुन थालेपछि ओली र दाहालबीच बुधबार विहान छलफल भएको हो। यसअघि दाहालले एमाले नेता माधव नेपालसँग मंगलबार छुट्टै वार्ता गरेको थिए।
सो अवसरमा नेपालले एकता संयोजन समितिको बैठक चाँडो बोलाउन सुझाव दिएका थिए। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार बुधबार दुई अध्यक्षबीचको छलफल पार्टी एकतालाई प्रगति उन्मुख बनाएको छ। यसअघि पार्टी एकताकालागि गठन गरिएका दुई कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनमा ओली र दाहाल जुटेका छन्।
पार्टी एकताका विषयमा बिहीबार बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार संचालनमा एकलौटी गरेको, पार्टी एकताका विषयलाई महत्व नदिएको भन्दै माओवादीले गुनासो गर्दै आएको थियो। एमालेले भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलगायतको काममा व्यस्त हुनु परेको भन्दै जवाफ दिँदै आएको थियो।
ओली र दाहालबीच बजेट ल्याउनु अगाडि नै पार्टी एकता गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दुई दलबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै पार्टी एकता गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसो हुन नसके बजेट अगाडि नै एकता गर्ने गरी छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले यही जेठ सात गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ भने जेठ १६ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसैबीच पार्टी एकताबारे छलफल गर्न नेकपा एमालेले बुधबार नै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ।